SAWIRO:-Banaanbax ka dhacay Buulo Burde iyo xiisad ka taagan | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA SAWIRO:-Banaanbax ka dhacay Buulo Burde iyo xiisad ka taagan
SAWIRO:-Banaanbax ka dhacay Buulo Burde iyo xiisad ka taagan
Banaanabxaan ayaa saaka waxaa uu ka dhacay xaafado ka tirsan degmada Buulo Burde ee Gobolka Hiiraan,waxaana uu ahaa mid looga soo horjeeday dowlad goboleedka Hir-Shabeelle.
Qaar kamid ah dadka ku nool degmada buulo burde ayaa isugu soo baxay wadooyinka degmadaas,iyaga oo banaan baxooda uga soo horjeeda safar la sheegay in uu degmdaasi ku tegayo Wasiirka Arrimaha gudaha Hir-Shabeelle Maxamed Cali Caadle.
Wararka laga helayo Buulo Burde ayaa waxaa ay sheegayaan in sidoo kale dadka banaanbaxa dhigaya ay kasoo horjeedaan Maamulka Cusub ee degmadaasi ay u magacaawday Wasaaradda Arrimaha gudaha Hir-Shabeelle, iyaga oo dhagxaan iyo birar ku jaray qaar kamid ah wadooyinka Buulo Burde.
Banaanbaxa ka dhacay degmada Buulo Burde ayaa waxaa uu saameyn ballaaran ku yeeshay isku socodka dadka iyo Ganacsiga Magaalada,waxaana la soo sheegayaa in halkaasi ay xiisad ka taagan tahay.
Degmada Buulo Burde ee Gobolka Hiraan ayaa waxaa ku sugan wafdi uu horkacayo la-taliye sare oo ka tirsan Xafiiska Madaxweynaha Hir-Shabeelle iyo Wasiiro, iyaga oo ku howlan sidii loo xalin lahaa xiisada ka dhalatay isbedelkka lagu sameeyey Maamulkii degmada Buulo Burde.